धमाधम लागु औषध कारोबारी र सेवनकर्ता पक्राउ : RajdhaniDaily.com
Home Breaking News धमाधम लागु औषध कारोबारी र सेवनकर्ता पक्राउ
एक महिनाको अवधीमा ११ जना प्रहरी फन्दामा
सप्तरी, राजविराज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले लागु औषध नियन्त्रण अभियान कडाईका साथ संचालनमा ल्याएपछि धमाधम सेवनकर्ता र कारोबारी पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
यसैक्रममा आइतबार साँझ ७० हजार नगदसहित दुई जना लागु औषध कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका २ फत्तेपुर निवासी ३५ वर्षिय ब्रिटिस थापा मगर र सोही नगरपालिका वडा नं. १ निवासी ३० वर्षिय भूमिराज थापा छन् । साँझ ५ बजेतिर भारतीय सीमासँग जोडिएको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका १४ स्थित रम्पुरा बेरियाघाट सडकमा सहायक प्रहरी निरिक्षक रामनजी यादवको कमाण्डमा खटेको टोलीले चेकजाँच गर्दा थापाद्वय पक्राउ परेका हुन् ।
स.८प. ९०९५ नम्बरको मोटरसाइकल चढेर आँउदै गरेका थापाद्वयको साथबाट ७० हजार नगद तथा प्रतिबन्धित लागु औषध बरामद भएको प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र धमलाले बताए । ७० हजार नगदका साथै उनीहरुको साथबाट प्लाष्टिकको झोलामा लुकाई राखिएको डाईजिल्याब ५० एम्पुल, फेनारगन ५० एम्पुल, लुपिजेसिक ५० एम्पुल बरामद भएको जानकारी दिएका प्रहरी उपरिक्षक धमलाले थापाद्वयलाई सोमबार सप्तरी जिल्लन अदालतबाट म्याद थप गराई लागु औषध ऐन अन्तरगत आवश्यक कारवाही प्रकृया अघि बढाइएको बताए ।
उनीहरु भारतीय बजारबाट प्रतिबन्धित लागु औषध खरिद गरि ल्याउने र नेपालको विभिन्न सहरमा लुकिछिपी बिक्रि बितरण गर्दै आएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रण अभियान थालेको एक महिना नबित्दै ११ जना लागु औषध कारोबारी र सेवनकर्ता पक्राउ गरिसकेका छन् । त्यस्तै यस अवधीमा पक्राउ परेकाहरुबाट २ हजार २० पिस नाइट्रोजन ट्याब्लेट, ६७ सि डाइजील्याब, १ सय ४४ पिस स्पास्मोप्रोभेल ट्याब्लेट, ५० एम्पुल लुपिजेसिक, ६४ बोतल कोरेक्स, ५० एम्पुल फेनारगन र ५० ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सार्वजनिक सेवामा निर्णय निर्धारण
व्यक्तिगत तथा संस्थागत जीवनमा निर्णय लिनु अपरिहार्यता हो । निर्णय निर्धारण प्रत्येक जीवात्माको अनिवार्यता हो भन्दा पनि हुन्छ । निर्णय नलिएसम्म गतिशीलता, परिवर्तन र...
हत्या, हिंसा र आतंकले विकास अघि बढ्दैन : मुख्यमन्त्री राई
इलाम । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हत्या, हिंसा, आतंकले विकास अघि नबढ्ने बताएका छन् । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाको माङमालुङमा महाप्रभु ज्योतिनन्द...
दुई अर्बको कर छली : १६ आरोपीविरुद्ध मुद्दा
काठमाडाैं । दुई अर्ब बढी राजश्व छली गरेको अभियोग लागेका १६ जनाविरुद्ध आज राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि...
खेल Kumar Raut - March 4, 2020 0
काठमाडौं । थाइल्याण्डमा जारी एसिसी इस्टर्न रिजन पुरुष टि ट्वान्टी कप क्रिकेटमा नेपालले आयोजक थाइल्याण्डलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा पहिलो जीत दर्ता गराएको छ । बैंककको...
Breaking News Roshan Shrestha - February 25, 2021 0
प्रमुख Dhruba Lamsal - April 4, 2020 0
बैतडी । बैतडीको मेलौली नगरपालिका ९ असुरमा खोरमा फसेको चितुवालाई उद्धार शनिबार गरिएको छ । बिहीबार राती चितुवा खोरमा फसेको थियो ।...
सप्तरी, राजविराज । प्रदेश २ सरकारले संचालनमा ल्याएको साईकृष्णा मेडिकल कलेजभित्र रहेको आइसोलेशन सेन्टरमा बसेका संक्रमितले खाना बहिष्कार गरेका छन् । मुलुककै सबभन्दा बढी एक...
खेल दिवाकरलाल अमात्य - June 9, 2021 0